Ugu dambeyntii Kader Khan oo shalay la duugay ama dhinaciisa dhulka la dhigay – Filimside.net
Ugu dambeyntii Kader Khan oo shalay la duugay ama dhinaciisa dhulka la dhigay
Halyeega Bollywood-ka Kader Khan Allaha u naxariisto wuxuuna geeriyooday 31 December maalintii ugu dambeesay 2018 balse shalay oo Khamiiis ahayd ayaa si rasmi ah loo aasay ama loo duugay sida qoyskiisa xaqiijiyeen.
Sarfaraz Khan oo ah Kader Khan wiilkiisa ayaa sheegay in aabihiis horey laga duugi waayay madaama ehelka qaar ka mid ah codsadeen in duugta lala sugo ayagoo Hindiya kasoo safreen soona gaareen magaalada Toronto ee dalka Canada si ay duugta Khan goob joogu ugu ahaadaan.
Walaalkeen Kader Khan wuxuu geeriyooday asigoo 81-jir ah asigoo in mudo ah xanuunsanaa waxaana si gaar ah u daryeeli jiray wiilkiisa Sarfaraz Khan oo dhawaanahan Canada ku haayay aabihiis siweyna ula tacaalay ilaa marka dambe uu Alle oofsado.
Kader Khan shalay oo Khamiis ahayd ayaa xabaalaha Meadowvale ee magaalada Toronto ku yaalo lagu duugay saacada marka ay ahayd 2:30 pm xiliga Canada ayadoo qoyskiisa iyo eheladiisa inta qaraabada la ahayd kasoo qayb galeen duugtiisa.
Kader Khan ayaa in ka badan 300-filim kasoo muuqday sidoo kalena in ka badan 250-filim ayuu sheekooyinkooda iyo hadalada la adeegsanayo uu qoray waana halyee taariikhda fanka Hindiya baal dahab ah kaga jiro asigoo xirfadiisa dhan walbo ka dhameestirneyd sidoo kalena ahaa jilaa Bollywood-ka ka dhaxeeyay oo qof walbo la shaqeyn jiray.